Mujaahidiinta iyo Maleeshiyaadka DF oo ku dagaallamay degmada Heliwaa.
Written by gobal on 05 February 2013. Dagaal hubka nuucyadiisa kala duwan la isku adeegsaday ayaa xalay gudaha degmada Heliwaa ee Muqdisho ku dhexmaray Ciidamada Mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka DF-ta ee fariisimaha ku leh degmadaasi.
Dagaalka oo xalay waqti danbe dhacay ayaa ka danbeeyay weerar ay Mujaahidiintu ku qaadeen fariisimaha maleeshiyaadka ee Biya Dageenka Suuqa Xoolaha, waxaana ka dhashay dagaalkaasi khasaarooyin kala duwan.
Dadka xaafadda Suuqa Xoolaha ayaa sheegaya in maleeshiyaadku ay saaka xireen goobaha ku dhaw fariisimahooda, iyadoona la xaqiijiyay in 3 askari ay kaga dhinteen halka 5 kalena ay ku dhaawacmeen dagaalka.
Saraakiil ka tirsan Ciidamada Mujaahidiinta Wilaayada Banaadir ayaa dhankooda sheegay in howlgalka Heliwaa uu qeyb ka yahay dagaallada qorsheysan ee geesiyaashu ay ka wadaan gudaha magaalada Muqdisho.
Maalmihii u danbeeyay ayaa maleeshiyaadka DF-ta qeybtooda Ashahaada la dirirka waxey Muqdisho ka sameynayeen howlgallo raaf ah oo kumanaan dad ah ay ku xirxireen balse arrinkaas marnaba ma baajin howlgallada Mujaahidiinta ay ka wadaan gudaha Muqdisho.
Baacsada nijaasada kufrigu baray xassuuqeena Birta hawga turiniyo inaad baas ku kala jeexdo Baynaada iyo liifku waa boobi hilib koode Waa inad baduugtaan ileen baadara dhalaye Barkimada rasaas uga dhigiyo baadka madixiisa Bilaaha cadaawaha ayey bili ku leeyiine Waa inaad biraysaan ileen baadaraa dhalayee Buufiya sidii ayax basada beerta naga fiiqan Baaloo tadaw quuda iyo baas inuu cunine Waa inaan biraynaa ilee baadaraa dhalayee Baqtigooda gooortaan dhignee bahalka loo loogo Burunjida Markuu Ey kacuno amase baalaydu Ku bil bila baruur tooda gaas baadaraa dhalayee February 05, 2013
Asc kwrma xld jihaadka somali February 08, 2013
Maxamed aadan cali
Asc walalaha musliminta February 08, 2013